अति गरीबको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क, अन्यलाई २ हजार ५ सय | गृहपृष्ठ
Home समाचार अति गरीबको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क, अन्यलाई २ हजार ५ सय
अति गरीबको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क, अन्यलाई २ हजार ५ सय
फागुन २, बाग्लुङ । अति गरीबमा सूचीकृत परिवारका सदस्यले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले परिचयपत्रका आधारमा अति गरीबलाई निःशुल्क बीमा गराउने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट परिचयपत्र जारी नहुँदा विपन्न परिवार बीमा सुविधाबाट वञ्चित भएका थिए ।
सूचीकृत सबैले परिचयपत्र नपाइसकेको अवस्थामा लक्षित वर्ग नै स्वास्थ्य बीमाबाट वञ्चित हुने भएकाले सूचीकृत भएकै आधारमा बीमा गराइएको हो ।
परिचपयपत्र नआए पनि मन्त्रालयले अति गरीबको सूचीमा राखेका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराइएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रदेश नं ४ का संयोजक जीवलाल खरेलले बताए । ‘लक्षित वर्ग नै बीमाको सुविधाबाट छुटेपछि मन्त्रालयले तयार गरेको सूचीका आधारमा सेवा दिइरहेका छौँ’ संयोजक खरेलले भने । उनका अनुसार पहिलो चरणमा अति गरीब परिवारलाई मात्र निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
गरीब परिचयपत्र वितरण हुनासाथ सबैखाले गरीब परिवारको स्वास्थ्य बीमामा सहज पहुँच पुग्ने संयोजक खरेलको भनाइ छ । प्रदेश नं ४ का ५ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ ।
बाग्लुङमा दुई वर्षअघि र कास्की, म्याग्दी, गोरखा र तनहुँमा यसै वषदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भएको हो । सरकारले शुरुमा बाग्लुङ, इलाम र कैलालीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । बाग्लुङमा हालसम्म ५ हजार १ सय ७२ परिवारका २४ हजार ३ सय ५५ जना सदस्यको स्वास्थ्य बीमा भएको छ ।
अति गरीब ५ सय ४४ परिवारका २ हजार ८ सय ४५ सदस्य बीमा कार्यक्रममा जोडिएका छन् । बाग्लुङका दर्ता अधिकारी जमुनादेवी सापकोटाका अनुसार हालसम्म जिल्लाका १४ हजार ५ सय ३० जना विमित सदस्यले उपचार सेवा पाएका छन् । जिल्लामै र बाहिरसमेत गरी तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट सामान्यदेखि जटिल उपचार सेवा विमित सदस्यले पाउँदै आएका हुन् । अति गरीब परिवारका सदस्यलाई त झन निःशुल्क बीमाले ठूलो राहत मिलेको छ ।
‘सामान्य परिवारले भने वार्षिक रू. २ हजार ५ सय बीमा रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोबापत ५ जनासम्मको परिवारले रू. ५० हजारसम्मको उपचार सेवा निःशुल्क पाउने गरेका छन् । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेमा प्रतिसदस्य रू. ४ सय २५ का दरले थप रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । रासस